ဘုရင့်နောင် တံတားထိပ်က အသေးစား ယာဉ်တိုက်မှူ (5-Aug-11) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဘုရင့်နောင် တံတားထိပ်က အသေးစား ယာဉ်တိုက်မှူ (5-Aug-11)
ဘုရင့်နောင် တံတားထိပ်က အသေးစား ယာဉ်တိုက်မှူ (5-Aug-11)
Posted by etone on Aug 5, 2011 in News | 17 comments
စည်းကမ်းမဲ့ မောင်းနှင်ခြင်းကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှူ ခဏခဏဖြစ်
အသေးစားဒဏ်ရာ ရတဲ့လူအချင်းချင်း ကူညီနေကြပုံပါ ။
ကားခေါင်းက ချောက်ထဲသို့ ဦးတည်နေတဲ့ ကားပုံနဲ့.... ဒဏ်ရာရတဲ့လူတချို့ကို လာကြည့်တဲ့ နီးစပ်ရာ ဒေသခံတွေရဲ့ ပုံပါ
စောစောစီးစီး မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာဘူး
နာကျင်မှူကို ခံစားနေရသော စပယ်ယာ
၂၀၁၁၊သြဂုတ်လ ၅ရက်နေ့ ၊ မနက် ၇နာရီ ၃၀မိနစ်ခန့်အချိန်တွင် ဘုရင့်နောင် တံတားထိပ်၌ အသေးစား ယာဉ်တိုက်မှူတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် .. ကျွန်မတို့ ရုံးသွားချိန်မိုကလို့ … ကားတွေလည်း ပြည့်ကြပ်ခဲနေတာပေါ့ … ။ ဘုရင့်နောင်မီးပွိုင့်ကနေ တပ်ထိပ်မှတ်တိုင် ကျော်ထိ ကားတန်းကြီး တုတ်တုတ်မှ လှုပ်လို့မရပဲ ရပ်ထားရတဲ့ အနေထားပါ ။ ကျွန်မတို့ ကား အနားက ဖြတ်သွားချိန်မှာတော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူများ ရှိသေးတာမြင်ရတဲ့အတွက် ယဉ်တိုက်မှူ ဖြစ်ပွားချိန် မကြာသေးမှန်း တွက်ဆမိပါတယ် … ။
ကြီးကြီးမားမား ဒဏ်ရာရမှူမျိုး မရှိသော်လည်း … သွားကျိုးခြင်း …လက်ခြေကျိုးခြင်း … ထိခိုက်ပြဲရှခြင်း ၊ ခေါင်းကွဲခြင်းမျိုးများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး …. အသေပျောက်မရှိကြောင်း စပ်စုခဲ့ပါတယ် ..။ ဒိုင်နာကားနှင့် ဘီအမ်ကား လမ်းကြောင်း လုရင်း တိုက်မိတာဖြစ်မည်လို့လည်း ခန့်မှန်းရပါတယ် … ။ ကားအရှိန်ကြောင့် ဒိုင်နာကားမှာ ဘုရင့်နောင်တံတား ကုန်းပတ်လမ်းပေါ်မှ … တံတားအောက်ချောက်သို့ ဦးတည်နေတာကိုလည်း ရင်မောဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ရပါတယ် … ။ အများပြည်သူ ရုံးတက်ချိန်မို့ …ကားတန်းကြီးမှာ မှတ်တိုင် နှစ်ခုစာတိုင်အောင် ရှည်လျား ပိတ်ကြပ်နေတာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ် … ။ မနက်စောစော အနိဌာရုံမြင်ကွင်းမို့ … ကြုံတွေ့ရသူမပြောနဲ့ ကျွန်မတို့လို မြင်တွေ့ရတဲ့ ဘေးလူတွေပါ စိတ်မချမ်းသာ စရာပါပဲ … ။ ဘယ်သူက မှားမှန်းမသိ ၊ ယာဉ်တိုက်မှူ အမျိုးစားက သေးပေမဲ့ …ကြုံတွေ့ရသူတွေရော .. မြင်တွေ့ရသူတွေရဲ့ မနက်ခင်းလေး .. .အကျည်းတန်သွားရပြီလေ … ။ ကားမောင်းတဲ့လူတွေကလည်း စည်းစနစ်နဲ့ မမောင်းတော့ … ဒီလို ယဉ်တိုက်မှူမျိုး .. ဘုရင့်နောင် တံတား ပေါ်နဲ့… တံတားပတ်လမ်းတလျှောက်ခဏခဏဖြစ်တတ်ပါတယ် … ။ ဒါတွေကို သေချာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ဖို့ ကောင်းနေပါပြီ …. ။ ကားပိတ်တဲ့ ပြသနာ ပွိုင့်ပျက်လို့ …ဂျမ်းဖြစ်ရတဲ့ ပြသနာကလည်း … ညနေတိုင်းလိုလိုဖြစ်တတ်တယ် … ။ နိုးထလာတဲ့ မနက်ခင်းလေး ကားပိတ်ခြင်း ၊ အနိဌာရုံမြင်ကွင်းတွေနဲ့ …. ပျော်စရာမကောင်းတော့တာမို့ … လူသားတိုင်း စည်းကမ်းရှိလျှင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ … တွေးမိပါတော့တယ် .. ။
(ကား မောင်းနေတုန်း … လျှပ်တပြတ်လေး ဓါတ်ပုံရိုက် ဖို့အတွက် ကူညီပေးခဲ့တဲ့… သူငယ်ချင်း သက်မာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် )
ဟိုးတလောကလည်း ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့်မှာ ကားတိုက်မှုဖြစ်သေးတယ်
“ဘီအမ်ဘရိတ်ပေါက်လာပြီ၊ ဟိုးဆရာ ဟိုးဆရာ”ဆိုပြီး
may thu moe myint အသစ်ထင်ပါတယ် … အခုမှ ပထမဆုံး ကော့မန့်ပေးတာ တစ်ခုထဲမို့… သဂျီးဆိုက်ရှင်းနေတာနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ … ရထားတဲ့ ပွိုင့်ထဲ ၂၀ နှုတ်ခံရမှာပါ … ဒါကြောင့် … သူဂျီးမပျက်ခင် ကျွန်မဖျက်ပေးလိုက်လျှင် … ပွိုင့်တင်ခလေးပဲ နှုတ်ခံရမှာမို့ … ကျွန်မကပဲ ဖျက်ပေးလိုက်လျှင်ကောင်းမလား တွေးမိပါသေးတယ် .. ။ ရွာထဲမှာ စည်းကမ်းတင်းကြပ်နေတာမို့ … သေချာလေး စည်းကမ်းတွေ ၊ ကြေငြာချက်တွေ ပြန်ဖတ်သင့်ပါတယ် ။
အဲဒီတယောက် မန်းတာ ရှင်းလိုက်ပါပြီ…
ရန်ကုန်ကကားမောင်းသူတွေ.. မြန်နှုန်းမြင့်မမောင်းကြသေးတာမို့.. အက်စိဒန့်တွေမှာ.. သိပ်အထိအခိုက်မကြီးတာတော့..သတိထားမိတယ်..။
ဂျပန်က ကျည်ဆန်ရထားမစီးဖူးဘူး။ ရန်ကုန်မှာအမြန်ဆုံး တိုက်ကြီး မှော်ဘီ ရန်ကုန် ကားတွေစီးဖူးတယ်။ မြန်သလားမမေးနဲ့ဗျို့၊ ခေါင်းပေါ်ကဆံပင်သုံးလက်မလောက်က မျက်နှာကိုလေတိုးနှုန်း နဲ့ ပြန်ရိုက်တာ စပ်တောင်စပ်တယ်။ kai ပြောတဲ့ မမြန်ဘူးဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းတောင်မသိပါဘူး။
ခု လာပြန်ပြီ။ 124 အထူးယာဉ်လိုင်း၊ မှော်ဘီ တိုက်ကြီးကားထက်သာတယ်။ ဘရိတ်တွေကောင်းလို့သာ။ တစ်ခါတော့ ဆူးလေလမ်းဆုံမှာ အဘွားကြီးတစ်ယောက်ကို တိုက်ချလိုက်တာ သေသွားတယ်လို့ကြားတယ်။
ကားလမ်းတွေလည်း အမြဲပိတ်တယ်။ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်ထက်တောင် ဆိုးသေးတယ်။ ကားတိုက်မှုတွေကတော့ နေ့စဉ်နဲ့ရက်ဆက်ဆိုသလိုပါပဲ။
ခရီးသည်တွေသနားစရာပဲနော်… ကျွန်တော်တို့တောင်ဒဂုံမှာလည်း ခဏခဏဖြစ်တယ်ဗျ အက်စီးဒင့် ဘီအမ်တွေက အရမ်းမောင်းတာ အပြိုင်ပဲ အခါခါတိုက်လည်း မမှတ်ကြဘူးဗျိုး.. ကျွန်တော်ကတော့ အထူးပဲစီးတယ်.. ဘီအမ်တွေကိုကြောက်လွန်းလို့ဗျာ ..
အရပ်ကတို့ ရေ… အခုမှ ကျုပ်တင်တဲ့ပုံ သေချာကြည့်မိတယ်.. စပယ်ယာ ခြေချောင်းလေးတွေ ပြတ်သွားတာ ရိုက်ထားတာ ပြတ်တဲ့ခြေချောင်းလေးတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ခြေထောက်ပုံ တပိုင်းပြတ်နေလေရဲ့ .. ရိုက်ချက်ကတော့ ကမ်းကုန်တော်တယ် နော် … ဟွန့် 
etone ရေးတာကတာ့ အသေးစားယာဉ်တိုက်မှု။ ဘုရင့်နောက်မှာ အလုပ်ဆင်းမယ့်သူက အလယ်တပ်ထိပ်က ပြန်လှည့်ပြီး အလယ်တံတားက ပတ်လာရတယ်။ လမ်းတွေပိတ်တာ။
နောက်ဆုံးပုံမှာ ခြေထောက်ကြီး လိန်နေတယ်နော် ။ ခြေချောင်းတွေလည်း ပြတ်နေတယ်။ နဂိုတည်းက ပြတ်နေတာလား ကားaccidentဖြစ်မှပြတ်သွားတာလားတော့မသိဘူး။ etone မမက တကယ့် နေရာကောင်းကိုတော့ အပီအပြင်မရိုက်လာဘူး ။
မရွှေချောရေ .. ကျုပ်လည်း အလျှင်မြန်ရိုက်လိုက်တာပဲ ..ပုံပြန်ကြည့်မှ ခြေထောက်ပါမလာတာ နာသကွာ … ။ ဓါတ်ပုံရိုက်တော့.. စစ်သားနှစ်ယောက်ပြူးကြည့်နေတယ် တွေ့လား ဟင့် ..
ပြူးကြည့်တဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံးလည်းမတွေ့ပါလား ။ ဟိ
စပယ်ယာ ခြေထောက် တစ်ချောင်း ပြတ်သွားတာလား..
မြေကြီးထဲ ဗွက်ထဲ ကျနေလို့ေ ပျာက်နေတာလား..
အထင်တော့ ကားနှစ်စီးကြား ညပ်ပြီး လိမ်သွားတာထင်တယ်.
ဟိုး အရင် မြေနီကုန်းမှာလဲ ဥနှောက်တွေ တစ်စစီကျဲပြန့်နေတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်..
အဲဒီအနားမှာ ခနခန ကား အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်တယ်..
ကျနော် တွေ့ခဲ့တာပြောရရင် ကားဆရာက မောင်းပြေးတော့တာပဲ..
ဆွမ်းကြီးလောင်း ခံရမယ် စိုးလို့ထင်ပါတယ်…
etone ကတော့ သဂျီးသမီး ပီသပါပေတယ်ကွယ်။ လျှပ်တစ်ပျက်ရိုက်ချက်နဲ့ အမှန်တကယ်သွက်လက်တဲ့ မီဒီယာသမားပေပဲ။
(ရန်ကုန်ကကားမောင်းသူတွေ.. မြန်နှုန်းမြင့်မမောင်းကြသေးတာမို့…) ဆိုရအောင် လျှပ်စစ်ရထားလည်း မဟုတ်၊ ထိုင်ကန်တော့ပြီးမှ မောင်းရလောက်အောင် မော်ဒယ်မြင့်မြင့်တွေချည်းပဲ။ ဒီက ဒိုင်နာဒရိုင်ဘာတွေ မောင်းတာ အမေရိကန်က ပိုင်းလော့ကတောင် အရှုံးပေးရမယ်။ ဖြစ်လိုက်ရင် ပွဲချင်းပြီးပဲ။
ကျွှန်တော် ရန်ကုန်ရောက် ရင်ဘယ်တော့မှ လိုင်းကားမစီးဘူး ။တခါက ကျွှန်တော် ကောင်မလေးက ဇွတ်စီးခိုင်း လို့ ဒိုင်နာ ကား ရှေ့ခန်း မှာလဲရ တာနဲ့စီးလိုက်တာ ကားပြိုင်မောင်း လို့ဘုရားတ ပီး လိုက်ရ တယ်။ကံကောင်းလို့မသေတာ။အစိုးရ ကလဲ လူပိုတင်ရင်မဖမ်းပဲ ပိုက်ဆံတောင်းတယ်။အမြန်မောင်းတာလဲမဖမ်းဘူးဗျာ ။
ဒေါ်ဝင်းဝင်းလတ် နဲ့ဆုံးတုံးကအဲဘတ်လား မသိဘူးနော တိုက်တာလဲ ဖြည်းဖြေးလေးပဲ လို့ပြောကြတယ် သေဘို့ကံပါတော့လဲသူတယောက်ထဲသေသွားတာ